China PU vhiri Mugadziri uye Mutengesi | Ruiyi
PU mavhiri isarudzo yakakurumbira mukushandisa kwemaindasitiri nekuda kwekunyarara kwavo mukushanda kana ichienzaniswa nemavhiri akaomarara simbi kana simbi yakakandwa. Iwo PU mavhiri seanoshamisira absorber uye inobatsira kukwira kukwira. Inotora zvakare mapundu kubva munzvimbo dzisina kukwana. Kushandisa PU vhiri panzvimbo yesimbi kunogona kudzikisira zvakanyanya ruzha mazinga kubatsira kudzivirira nzeve dzevashandi vako.
PU mavhiri mutemo muzvikumbiro uko kuchengetedza pasi kwakakosha. Iwo mavhiri ePU anozotsausa uye ogadzira tsoka yakakura kwazvo kupfuura yakaoma vhiri zvigadzirwa, senge nylon. Iyi yakakura nzvimbo nzvimbo inobatsira kudzikisira kushushikana kwepasi uye nekuzvichengeta zviri nani chimiro kwenguva yakareba. Kune zvirimwa zvine uriri hwepasi zvinodhura uye zvakakomba pakuita kwako, vhiri rePU rinogona kunge riri sarudzo inosarudzwa.
Imwe bhenefiti ku PU mavhirimukushandisa kwemaindasitiri ndiyo coefficient yekukwesana kwemashoko acho. Iyi kukosha inotsanangura chiyero chesimba rekukakavadzana pakati pemiviri miviri uye nesimba rinoitsimbirira pamwechete. Rougher huso hunowanzo kuve nehunoshanda hunobudirira nepo hunyoro huso hune hwakaderera nekuda kwekukwesana kwavanogadzira pavanosvinirwa pamwechete.
PU mavhiri inowanzo kuve chinhu chinokatyamadza, saka mwero wayo wepamusoro wekukwesana unogona kubatsira kuchengetedza ngoro dzakakwenenzverwa kubva pakubvaruka. Kukosha kwekutarisa sekutsvedza kunogona kuva dambudziko kune akaomarara mavhiri zvigadzirwa.
PU mavhiri zvakare inopa yakanakisa traction yekutyaira mavhiri uye inobatsira kudzikisa huwandu hwemutoro uri pavhiri kuti uwane iyo inodiwa kutyaira simba.
Brand Ruiyi mudziyo wemotokari
Zita Kunze kwekushandisa mota
Musanganiswa wezvinhu Oxford jira + pombi yesimbi
Saizi 82 * 56 * 6CM
chimiro Maitiro eAmerica
Bata Mwaya kurapwa
Kurongedza Bhegi rekunze rimwe chete
Mavhiri pane dzimwe mota
Kubata kwakanaka, kwete nyore kutsvedza, kumwe kupfeka kusagadzikana, kuita kwakanaka
Pashure: Pet Fence
Zvadaro: Rubha vhiri
China PU Furo vhiri, Concrete chisanganiso Rori, Caster Wheel, China Kongiri Musanganiswa, PU Wheel, China PU Wheel,